Loo shaqeeye ahaan, waxay ahayd inaan ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalahayga sidaas darteedna aan u dhigo, markasta oo ay suurtagal tahay, xaalad taleefan. Si kastaba ha noqotee, suurta gal ma tahay inaan si fog u kormeero dhaqdhaqaaqa shaqaalaha taleefankayga?
Haddii hirgelinta shaqada taleefanka ee shirkaddaadu ay ka dhalatay heshiis wada-jir ah oo lala saxeexday ururada shaqaalaha ama dhibaato caafimaad, wax walba lama oggola oo waa in la ixtiraamo xeerarka qaarkood.
In kasta oo aad guud ahaan ku kalsoon tahay shaqaalahaaga, waxaad weli waxoogaa walaacyo ah ka qabtaa wax-soo-saarkooda markay telecommote soo gudbinayaan.
Sidaa darteed waxaad dooneysaa inaad xakameyso dhaqdhaqaaqa shaqaalaha ka shaqeeya guriga. Maxaa loo oggol yahay arrintan?
Shaqada taleefanka: xaddidaadda xakamaynta shaqaalaha
CNIL ayaa la daabacay dhamaadka Nofeembar, su'aal iyo jawaab ku saabsan shaqada taleefanka, taas oo ka jawaabeysa su'aashan.
Sida laga soo xigtay CNIL, waxaad si buuxda u xakamayn kartaa dhaqdhaqaaqa shaqaalaha ka shaqeeya taleefanka, haddii ay xakameyntani si aad ah ugu dhigantaa ujeeddada la raadinayo iyo in aysan ku xadgudbin xuquuqda iyo xorriyadda shaqaalahaaga iyo iyadoo la ixtiraamayo sida cad qawaaniinta qaar.
Ogow inaad haysatid, y ...
Shaqaynta taleefanka: ma la socon kartaa dhaqdhaqaaqa shaqaalahaaga? July 10th, 2021Tranquillus
READ Barashada Fogaanta: bartayaasha qaaciddada isku dhafan ayaa ka adkaaday
horeQorshayaasha keydinta shaqaalaha: tallaabooyinka ugu muhiimsan ee sharciga ASAP
socdaSidee loogu dhawaaqaa "dareemid lahaansho" iyadoo la adeegsanayo "shaqo fog"?